1 Samueri 3:1-21
3 Munguva iyi yose mukomana Samueri akanga achishumira+ Jehovha pamberi paEri, uye shoko raibva kuna Jehovha+ rakanga risingachanyanyi kunzwika mazuva iwayo;+ pakanga pasina zvairatidzwa,+ zvaiparadzirwa kwose kwose. 2 Zvino pazuva iroro Eri akanga akarara panzvimbo pake, uye maziso ake akanga asisanyatsooni;+ iye akanga asingachakwanisi kuona. 3 Rambi raMwari rakanga risati radzimwa, uye Samueri akanga akarara mutemberi yaJehovha,+ maiva neareka yaMwari. 4 Jehovha akashevedza Samueri. Iye akabva ati: “Ndiri pano.”+ 5 Akamhanyira kuna Eri achiti: “Ndiri pano, nokuti mandishevedza.” Asi iye akati: “Handina kukushevedza. Rarazve.” Naizvozvo akaenda akarara. 6 Jehovha akashevedzazve achiti: “Samueri!”+ Samueri akamuka, akaenda kwaiva naEri, akati: “Ndiri pano, nokuti mandishevedza.” Asi iye akati: “Handina kukushevedza, mwanakomana wangu.+ Rarazve.” 7 (Samueri akanga asati ava kuziva Jehovha, uye akanga asati atanga kuziviswa shoko raJehovha.)+ 8 Naizvozvo Jehovha akashevedzazve kechitatu kuti: “Samueri!” Iye akabva amuka, akaenda kwaiva naEri akati: “Ndiri pano, nokuti munofanira kuva mandishevedza.” Zvino Eri akaziva kuti Jehovha ndiye akanga achishevedza mukomana wacho. 9 Naizvozvo Eri akati kuna Samueri: “Enda urare, kana akakushevedza, uti, ‘Taurai henyu Jehovha, nokuti mushumiri wenyu ari kuteerera.’” Naizvozvo Samueri akaenda akarara panzvimbo pake. 10 Jehovha akabva asvika, akamira panzvimbo yake, akashevedza sezvaakanga aita pane dzimwe nguva kuti: “Samueri, Samueri!” Samueri akati: “Taurai henyu, nokuti mushumiri wenyu ari kuteerera.”+ 11 Jehovha akati kuna Samueri: “Tarira! Ndichaita+ chimwe chinhu pakati paIsraeri chokuti kana chero munhu upi zvake akachinzwa, nzeve dzake dzose dzichaunga.+ 12 Pazuva iroro ndichaitira Eri zvose zvandakataura nezveimba yake, kubvira pakutanga kusvikira pakuguma.+ 13 Umuudze kuti ndichatonga imba yake+ nokusingagumi nokuda kwokukanganisa kwaanoziva,+ nokuti vanakomana vake vari kutuka Mwari,+ asi iye haasi kuvatsiura.+ 14 Ndokusaka ndakapikira imba yaEri kuti chibayiro kana kuti chinopiwa hazvizoiti kuti kukanganisa kweimba yaEri kurege kurangwa nokusingagumi.”+ 15 Zvino Samueri akaramba akarara kusvikira mangwanani. Akabva avhura masuo eimba yaJehovha.+ Samueri aitya kuudza Eri zvaakanga aona.+ 16 Asi Eri akashevedza Samueri akati: “Samueri, mwanakomana wangu!” Iye akati: “Ndiri pano.” 17 Iye akati: “Akuudzei? Ndapota, usandivanzira.+ Mwari ngaakuitire saizvozvo uye awedzere pazviri+ kana ukandivanzira chinhu chimwe chete pane zvose zvaakuudza.” 18 Naizvozvo Samueri akamuudza zvose, uye haana kumuvanzira chero chinhu chipi zvacho. Iye akabva ati: “NdiJehovha. Ngaaite zvakamunakira.”+ 19 Zvino Samueri akaramba achikura, Jehovha akava naye+ uye haana kuita kuti chero chinhu chipi zvacho pane zvaakataura chiwire pasi.+ 20 VaIsraeri vose kubvira kuDhani kusvikira kuBheeri-shebha+ vakaziva kuti Samueri ndiye akanga abvumirwa kuti ave muprofita waJehovha.+ 21 Jehovha akazviratidzazve+ muShiro, nokuti Jehovha akazviratidza kuna Samueri muShiro achishandisa shoko raJehovha.+